Aza manome tsiny ny Messenger Messenger B2B (Email) | Martech Zone
Aza manome tsiny ny Messenger Messenger B2B (Email)
Talata, May 12, 2015 Wednesday, May 13, 2015 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo mpanjifanay dia nanontany androany raha tokony hifindra amin'ny mpanome tolotra mailaka hafa izy ireo amin'ny serivisy ampiasainy. Nanontany izahay hoe maninona ary nilaza izy ireo fa nahazo 11% bouncing mafy isao amin'ireo mailaka nalefan'izy ireo. Noheverin'izy ireo fa tapaka ny rafitra satria nanamarina izy ireo fa ny sasany amin'ireo adiresy mailaka izay nilaza fa misy ny fipoahana mafy dia mpandray mavitrika ao amin'ilay orinasa.
Amin'ny tranga mahazatra, a taha ambony kokoa mety hampiakatra volomaso kely. Na dia amin'ity tranga ity aza dia mamporisika ny mpanjifa izahay hiresaka amin'ny ekipa mpanafaka ao amin'ny mpamatsy tolotra mailaka azy ireo. Na izany aza, tsy orinasa mahazatra anao ity - orinasa miasa amin'ny sehatra B2B io ary ireo adiresy mailaka ao amin'ny lisitry ny mpisoratany dia tsy ny Gmail antonony anao na ireo mpandray anao hafa. Orinasa lehibe izy ireo izay mitantana ny mailany anatiny.
Ary ny mpanome tolotra mailaka amin'ity tranga ity dia manana laza miavaka amin'ny fahaterahana tsara. Ka mampisalasala ny olana ara-lazan'ilay IP amin'ilay mpandefa.
Ity scenario ity dia hafa noho ny fanaterana mailaka B2C. Noho ny habetsaky ny SPAM mikoriana amin'ny fifanakalozana mailaka, ny ankamaroan'ny departemanta IT dia manana fitaovana na serivisy naparitaka handavana ny SPAM. Ny rafitry ny mpanjifa matetika dia miankina amin'ny lazan'ny mpandefa, ny hafatra ary ny habetsaky ny Junk Filter Click raha te handefa na tsia ny mailaka amin'ny folder junk. Ary na eo aza izany dia tsy voadona ilay mailaka - voateraka… ao amin'ny fampirimana junk fotsiny. Mety tsy manana fampirimana junk akory ireo rafitra fandraharahana na mety hanonta ireo mailaka ary tsy hamela azy ireo hiditra mihitsy!
Mbola halefa ny mailaka B2C iray, saingy azo alefa amin'ny Junk Folder. Mailaka B2B; na izany aza, mety holavina tanteraka. Miankina amin'ny serivisy na ny fitaovana ampiasain'izy ireo hanakanana ny SPAM, miaraka amin'ireo fanovana napetrak'izy ireo, ny mailaka dia mety holavina noho ny adiresy IP an'ny mpandefa sy ny lazany, azo lavina noho ny atiny, na mety holavina mihitsy aza izy tsotra fotsiny satria ny hafainganana sy ny habetsaky ny mailaka alefa amin'ny mpandefa tokana.
Ao amin'ny sehatra B2C, ny mailaka dia nekena ara-batana miaraka amin'ny valiny miverina amin'ny mpandefa fa voaray ny mailaka. Ao amin'ny sehatra B2B, ny rafitra sasany dia mamoaka ny mailaka fotsiny ary manome kaody hadisoana diso an'ny a bouncing mafy.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fitaovan'ny orinasa B2B dia mandà ny mailaka miaraka amina kaody famaohana mafy izay tsy misy akory ilay adiresy mailaka (na dia mety hisy aza). Io, ampiarahina amin'ny vola ampaham-bidy hita any amin'ny orinasa, dia afaka mampiakatra ny tahan'ny fihenan'ny fampielezan-kevitra B2B ambony noho ny fanentanana B2C eo ho eo. Ity mpanjifa manokana ity dia mpanjifa teknolojia ihany koa - ka ireo mpandray azy ireo dia fiarovana ary olona IT… olona izay te-hihoatra ny sehatra fiarovana.
Amin'ny faran'ny andro, tsy mandainga ny mpamatsy tolotra mailaka… Notaterin'izy ireo fotsiny ilay kaody izay naverina avy amin'ny mpizara mailaka ny mpandray. Na dia mety manana olana amin'ny lazany IP aza ireo serivisy mailaka marobe (izay azonao arahi-maso mora amin'ny 250ok), amin'ity tranga ity dia ny lisitry ny mpandray kely nefa lasibatra no toa olana amiko. Ny hafatray ho an'ny mpanjifantsika:
Aza omena tsiny ny mpitondra hafatra!
Raha mpamatsy tolotra mailaka ianao na mpandefa mailaka marobe ary te hanara-maso ny lazan IP anao, manala olana amin'ny famindrana, na mandrefy ny toerana fametrahana anao marina, dia aza hadino ny manao demo 250oksehatra. Mpiara-miasa amin'izy ireo izahay.
Tags: tahan'ny fihenan'ny b2bmailaka mailakabouncing mafy
Ny modely manaraka ny varotra anao
Miara-miasa amin'ny Registrar Domain na Reseller ve ianao?
Dara Schulenberg (@dschulenberg)
May 13, 2015 ao amin'ny 5: 13 PM
Tanteraho tanteraka amin'ny mpanjifanao ny valinteninao, fa inona no nanoroanao azy ireo ny vokatr'izany?
May 13, 2015 ao amin'ny 8: 20 PM
Salama Dara! Fanontaniana lehibe, tokony nampidiriko io!
Asaivo manamarina ny mpamatsy mailaka azy ireo fa tsy misy olana amin'ny fahaterahana ary ahitsy izy ireo raha misy izany.
Mifandraisa amin'ireo mpanjifa manana adiresy mailaka manan-kery ary asao ny ekipany IT hahalala hoe nahoana no lavina ireo mailaka.
Fantaro fa misy turnam-bary taonina amin'ny B2B ary olana sarotra izay tsy voavaha tsotra izao. Aza mitsahatra mandefa ary mijanona maharitra raha misy olana.